Caalamka, 29 November 2016
Talaado 29 November 2016
Dadkii ugu badnaa ee tahriibayaal ah ayaa Sanadkan 2016-ka gaaray dalka Talyaaniga, sida lagu sheegay macluumaad-ururin dhowaan la sameeyay.
Diyaarad Sidday Cayaartoy oo Burburtay
Saraakiisha dalka Colombia ayaa sheegay in shan qof oo kaliya ay ka badbaaday diyaarad ay saarnaayeen 81 qof oo sidday koox kubadda cagta oo ka dhisan dalka Brazil, taasi oo dhacday ayada oo kusii jeeda garoonka diyaaradaha caalamiga ah Medellin.
Warbixin: Fidel Castro iyo Soomaaliya
Waxaa geeriyooday Fidel Castro, hoggaamiyihii hore ee dalka Cuba, kaas oo dalkaas oo xukumayey nus-qarnigii ugu dambeeyey. Fidel Castro wuxuu ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqyo badan oo ka dhacay qaaradda Afrika oo ay ka mid ahayd dagaalkii Soomaalida iyo Ethiopia dhex maray.
Erdogan oo u Digay Midowga Yurub
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay Midowga Yurub in haddii ay sii wadaan u hanjabaadda dalkiisa, inuu boqolaal kun oo muhaajiriin ah u ogolaan doono inay ku qul-qulaan dalalka Midowga Yurub.
Pakistan: 11 Qof Ayaa ku Geeriyootay Weerarka India
Pakistan ayaa sheegtay in weerar ay soo qaaday India uu ku dhacay baabuur rakaab oo marayey xuduudda Kashmir, halkaasi oo 11 qof oo shacab ah ay ku geeriyoodeen 15 kalena ay ku dhaawacmeen.
Maxkamadda Sare ee Masar oo Laashay Xukunkii Morsi
Maxkamadda sare ee dalka Masar ayaa maanta laashay xukunkii xabsi daa’inka ahaa ee lagu riday madaxweynaha xilka laga tuuray ee dalkaas Mohamed Morsi oo ka tirsan kooxda Ikhwaanul Muslimiin.
Turkey oo Ka Noqotay Sharci La Xiriira Guurka Caruurta
Ra’iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in dowladdiisa ay dib uga laabaneyso hindise, dadka wax dhaliila ay sheegeen inuu shraciyeynayo guurka caruurta, taa beddelkeedna ay u direyso guddi ka tirsan baarlamanka inay dib u eegis ku sameeyaan.
Kabul: 30 Qof oo ku Dhintay Qarax ka Dhacay Masjid
Mas’uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay masjid shiicada ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, 85 kalena ay ku dhaawacmeen.
Hindiya: 97 Qof oo Ku Dhintay Shil Tareen
Tareen nooca dheereeya ah oo ka baxay khadkii uu ku socday ayaa woqooyiga dalka Hindiya ku dilay ugu yaraan 97 qof dhaawacna uu ka soo gaaray in ka badan 100 qof oo kale.
Somalia oo Ka Qeyb Gashay Shirka Wakaaladaha Wararka
Waxaa maanta magaalada Baku ee xarunta dalka Azerbaijan ka furmay shirweynihii shanaad ee Wakaaladaha Wararka Aduunka.